स्वर मिलाई भनौं- दलाल राजनीति!
उनी गज्जबसँग हाँसे।
गम्भीर कुरा गर्ने र खुलेर हाँस्न सक्ने थोरै नेपाली राजनीतिज्ञमा पर्छन्, भुसाल। त्यसैले, सहमति या विमतिका विषयमा पनि उनीसँग कुरा गर्न उत्तिकै मजा आउँछ।
उनले दलाल पुँजीपतिको अर्थ विस्तारसँग भने, ‘अरू मुलुकमा त्यसको अर्थ जसरी लगाए पनि मैले हाम्रो सन्दर्भमा नाफाको अनुपातमा रोजगार सिर्जना नगर्ने र कर छल्ने व्यापारी तथा उद्योगीलाई दलाल पुँजीपति भन्ने गरेको छु।’
मेरो चासो नेपाली व्यापारी वा उद्योगपतिको वर्गीकरणसँग होइन। नेपालको राजनीतिसँग हो, हाम्रा राजनीतिज्ञसँग हो। मलाई केही समय अघिदेखि नै अहिलेको नेपाली राजनीतिको मूल प्रवृत्ति के हो, त्यसको चरित्र के हो भन्ने ठूलो कौतुहल छ। त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने, सर्वसाधारणलाई कसरी बुझाउने, उनीहरूले बुझ्ने भाषामा त्यसको नामाकरण कसरी गर्ने भन्ने खुलदुली छ।
त्यो प्रवृत्ति के हो भनेर हामीले छुट्ट्याउन सकेनौं भने, त्यसको नामाकरण गर्न सकेनौं भने साधारणदेखि पढेलेखेका मानिसलाई पनि राजनीतिको चरित्र बुझ्न गार्हो हुन्छ। हाम्रो देशमा के नमिलेको भनेर मानिसलाई दिक्क मात्रै लाग्छ, तर नमिलेको कुरा ठम्याउन सक्दैनन्। ठम्याउन नसकेपछि औंला उठाउन सक्दैनन्। लोकले निरन्तर औंला उठाउन नसकेपछि लोकतन्त्र बलियो हुन्न। हामीले कहिल्यै औंला उठाउन सकेनौं भने त लोकतन्त्रको गाडी अघि बढ्दै बढ्दैन।
मैले घनश्यामजीसँगको टेलिफोन संवादलाई पुँजीपतिबाट राजनीतितिर मोडेँ।
भुइँफुट्टा वर्ग भनेको के हो? त्यसको मूल चरित्र के हो?
भुइँफुट्टा वर्गको कुनै विगत हुन्न। यो कुनै निरन्तरताबाट आउँदैन, त्यसै पलाउँछ। एक्कासि प्रकट हुन्छ। त्यसको भविष्य पनि हुन्न। वा, कम्तिमा त्यसलाई भविष्यको कुनै चिन्ता हुन्न। भविष्यप्रति त्यसले कुनै उत्तरदायित्व वहन गर्दैन। ऊ कुनै समयप्रति वा कसैप्रति पनि जवाफदेही हुन्न। केही कुराप्रति चिन्तित हुन्न। यो भुइँफुट्टा वर्ग वर्तमानमा आफूले पाउने लाभप्रति मात्र लिप्त हुन्छ। यसले प्राप्त गरेको बुद्धत्व नै वर्तमानको लाभ हो, विगत वा भविष्यबाट निष्कन्टक लाभ!
बिपी कोइरालाले भनेजस्तो अहिलेको चिन्ता हाम्रो राजनीति भुइँफुट्टा वर्गको कब्जामा पर्यो कि भन्ने मात्र होइन। अहिलेको चिन्ता त्योभन्दा आधारभूत छ, त्योभन्दा गम्भीर छ। झुसिलकीराको पुतलीमा कायापलट भएझैं हाम्रो राजनीतिक वर्गको आचरण भुइँफुट्टा वर्गको आचरणमा परिणत भयो कि?
होइन भने देशका लागि १४ वर्ष जेल जीवन बिताएका केपी ओली, १३ वर्ष जेल बसेका रामचन्द्र पौडेल, ९ वर्ष जेल बसेका शेरबहादुर देउवा र मुलुक ‘बनाउन’ आफैं मर्न तयार हुँदै १७ हजार नेपालीको ज्यानको कारक बनेका पुष्पकमल दाहालको राजनीतिमा दलालीको गन्ध किन यति धेरै?
हाम्रो राजनीति पूर्णतः दलालीमा लिप्त हुँदैछ भन्ने पछिल्लोपटकका दुई घटनाले थप पुष्टि गरेका छन् - प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति प्रकरण र चुरे दोहनको मापदण्ड खुकुलो पारेर ढुंगागिटी भारत निकासी खुला गर्न मन्त्रिपरिषदमा लैजान खोजेको ठाडो प्रस्ताव।
यी दुई घटनाको चर्चा हामी केही बेरमा गरौंला। त्योभन्दा अगाडि राजनीतिमा दलालीका केही प्रचुर संकेतबारे चर्चा गरौं।
म सबैभन्दा आश्चर्यमा परेको सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले पठाएका मन्त्रीहरू देखेर हो। पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि संविधान लेखन सहज बनाउने गहन जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रिपरिषद् थियो त्यो। त्यसमा एमालेले १० जना मन्त्री पठाएको थियो। त्यसमध्ये छ जना सभासदै थिएनन्। एमालेले उनीहरूलाई निर्वाचनमा टिकटसम्म दिएको थिएन। एमालेका सय जना प्रतिभाशाली नेता एक ठाउँ उभ्यायो भने ती छ जना त्यहाँ अट्ने पनि छैनन्।
तर, प्रत्यक्ष चुनावबाट निर्वाचित झन्डै सय जना सभासद् र त्यतिनै संख्यामा समानुपातिकमार्फत चुनिएका सभासद्लाई पछारेर ती छ जना मन्त्री बने। यथार्थमा केपी ओली, झलनाथ खनाल र माधव नेपालको कृपामा उनीहरू नेताहरूका छायाँमन्त्री बनेका थिए, नेताहरूकै सेवाका लागि।
त्यसरी मन्त्री बनेकी राधा ज्ञवालीले गरेको धेरै विवादित काममध्ये एउटा काम कुलमान घिसिङलाई चिलिमे आयोजना प्रमुखबाट हटाउनु थियो। जबकि, उनले अहिले विद्युत प्राधिकरण प्रमुख भएर लोडसेडिङ हटाएजस्तै त्यो बेला पनि उदाहरणीय काम गरेका थिए। उनलाई कुनै आरोप लगाएर सरुवा गरिएको पनि होइन। एमाले समर्थक अमुक मानिसलाई त्यहाँ लैजान कुलमानलाई हटाइएको थियो।
त्यस्तै, एमाले नेता झलनाथ खनालको ‘कोटा’ मा नियुक्त निर्वाचित सासंद भीमप्रसाद आचार्य पर्यटन मन्त्री भएको केही महिनामै निकालिए। ‘आर्थिक लाभ’ को विषयमा नेतृत्वसँग मतभेद भएपछि उनी हटाइएका थिए। त्यसपछि त खनालले आफ्ना निजी सचिव दिपकचन्द्र अमात्यलाई नै पर्यटनमन्त्री बनाएर पठाए। उनले ‘बदमासी’ गरेपछि ओलीले झलनाथ खनालको कोटा नै खारेज गरिदिए। ‘आफ्नै’ मान्छे कृपाशुर शेर्पालाई नयाँ पर्यटनमन्त्री बनाए। भन्सारको खरदारदेखि भोजपुरबाट प्रत्यक्षतर्फ सांसदको टिकट पाउँदै शेर्पा जसरी एकैपटकमा मन्त्री बने, त्यो स्वयं नेताहरूको आर्थिक लाभ र कर्मचारीको दलालीसँग कम जोडिएको थिएन।
क्रसर उद्योगीहरूलाई अकुत सम्पत्ति कमाउन बाटो खोल्ने र देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने चुरे दोहनको यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुले दलाल र स्वार्थ समूहको पहुँच सिंहदरबारमा कति बलियो र स्थायी बनेको छ भन्ने देखाउँछ। दलाली नै स्थायी सत्ता भैसक्यो भन्ने तर्कलाई यसले बल पुर्‍याउँछ।
चुरे दोहनको प्रस्ताव देखादेखी खोटपूर्ण छ। एकातिर ढुंगागिटीको अभाव छ, त्यसैले चुरे दोहनको मापदण्ड खुकुलो पार्नुपर्‍यो भनिएको छ। अर्कातिर भारत निकासी खोल्ने भनिएको छ। मुलकमा अभाव भए भारत निकासी किन खोल्ने?
सेतोपाटीले गरेका शृंखलाबद्ध रिपोर्टिङले प्रस्टैसँग देखाएको छ, मुलुकमा ढुंगागिटीको कुनै अभाव छैन। त्यसको उल्टो भारत निकासी खुला रहेका बेला सञ्चालनमा आएका कैयन क्रसर उद्योग आन्तरिक मागको अभावमा बन्द भएका छन्। जो सञ्चालनमा छन्, आन्तरिक माग कम रहेकाले तिनको पनि स्थिति डामाडोल छ। अर्कातिर सरकारले तोकेको मापदण्ड मिचेर चुरे दोहन गर्ने काम जारी नै छ।
प्रधानमन्त्री साँच्चै जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुन्थे भने उनले मापदण्ड खुकुलो पार्ने प्रस्ताव आउनेबित्तिकै राज्यका सम्बन्धित निकायसँग सोध्थे। चुरे संरक्षणका लागि भन्दै राष्ट्रप्रमुखका नाममा खोलिएको सरकारी निकायसँग यथार्थ के हो भनेर बुझ्ने थिए। अभावको हल्ला प्रायोजित हो भन्ने उनलाई तत्काल थाहा हुने थियो। यतिले पनि चित्त नबुझे थप बुझ्न अध्ययन समिति बनाउन सक्थे। तर, क्रसर व्यवसायीको आर्थिक स्वार्थ र सम्भवतः आफ्नै आर्थिक स्वार्थमा प्रधानमन्त्रीका आँखा यस्तरी टालिएका थिए, ढुंगागिटीको भारत निकासीले चुरेमा ल्याउने विनाश उनले देख्दै देखेनन्।
पार्टीहरूको आर्थिक जीवन कसरी सञ्चालन गर्ने? पारदर्शी कसरी बनाउने? नेता र राजनीतिकर्मीहरूको स्वच्छ आचरणका लागि के कस्तो पद्धति निर्माण गर्ने? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यिनै आधारभूत प्रश्नको हल नखोजेर हाम्रो राजनीति दलालीमा परिणत हुँदै गएको हो।
यी प्रश्नको उत्तर हामीले आविष्कार गर्नु पर्दैन। उत्तर खोज्न चन्द्रमा जानुपर्दैन। संसारभरका लोकतन्त्रमा फरक–फरक मोडलको प्रयोग भएको छ। तिनमा हामीले दृष्टि लगाउने र हामीलाई के उपयुक्त छ भनी तय गर्ने हो। हामीलाई अनुकूल हुने गरी कसरी अभ्यास गर्ने मात्र हाम्रो चुनौती हो।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फाल्गुण ५, २०७३ १४:११:५२